Mareykanka oo Faah faahin ka bixiyay Weeraradii ay ka fuliyeen Deegaano ka mid ah Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya – Balcad.com Teyteyleey
Mareykanka oo Faah faahin ka bixiyay Weeraradii ay ka fuliyeen Deegaano ka mid ah Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya
By Maxamuud Axmed	 On Nov 13, 2017
Ciidamada Militariga Mareeykanka ayaa sheegay inay Sadax Weerar 24 Gudahood qaadeen, Weeraradaas oo Mareykanku sheegay inay sii kordhinayaan ololohooda ka dhanka ah Al-Shabaab iyo Daacish.
Weeraradaana Duqaymaha ah ayaa waxaa fuliyay Diyaarado aan la magacaabin ayaa waxaa lagu dilay Maleeshiyaad ka Tirsan Al-Shabaab sida ay AP u sheegtay Haweeney Afayeen u ah Ciidamadda Mareeykanka ee ku sugan Qaaradda Africa, taasi oo sheegtay in sadaxda Weerar ee is xig xigay uu Mareeykanku ka Fulliyay Soomaaliya.
Mareeykanka ayaa waxaa Howlagaladaan kala shaqeyay Dowladda Soomaliya sida ay Fahayeenadu, kan koowaad weeraradaasi wuxuu dhacay 4:30 Galabnimo ee Sabtigii Wuxuuna ka dhacay Deegaanka Goof-gaduud oo ka tirsan gobolka Bay 250 Mile na u jirta Muqdisho, waxaa Weerarkas ku dhintay Hal Dagaalyahan oo ka Tirsan Al-Shabaab oo Masuuliyiinta Mareeykanku aysan Aqoonsigiisa Shaacin.
Afayeenka u Hadashay Ciidamadda Mareeykanka waxay sheegtay in waxyeelo shacab aysan ka dhalan Weeraradooda, waxayna intaas ku dartay inay ka dheeraanayaan wax kasta oo khasaare u keen kara shacabka.
Sidoo kale Duqaynta Labaad waxay dhacday Axaddii ku dhawaad 3 Aroornimo waxaana lala Beegsaday Xubno ka Tirsan al-Shabaab oo ku sugnaa Shaeelaha Hoose, goobta Weerarka Labaad uu ka dhacay wuxuu Mareeykanku ku sheegay Meel 40 KM Galbeed kaga Beegan Muqdisho.
Duqaynta Sadaxaad wuxuu Mareeykanku la beegsaday Ururka Daacish ee ku sugan Gobolka Bari, wuxuuna Weerarkaasi dhacay 9 Subaxnimo ee Axaddii shalay wuxuuna ahaa Weerarkii Labaad ee Mareeykanku uu la Beegsado Uruurka Daacish ee Soomaaliya.
Dhanka kale Afayeenka u hadashay Mareeykanka waxay sheegtay in Mailitariga Mareeykanka ee Qaaradda Africa uu sii wadi doono Taageeradda uu siinayo Ciidamadda Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM, si looga Adkaado Al-Shabaab.
The post Mareykanka oo Faah faahin ka bixiyay Weeraradii ay ka fuliyeen Deegaano ka mid ah Koofurta iyo Bartamaha Soomaaliya appeared first on Ilwareed Online.